USA: Obama oo ku hanjabay inuu joojin doono hubka ku jira gacanta shacabka Maraykanka [Daawo] | shumis.net
Home » News » USA: Obama oo ku hanjabay inuu joojin doono hubka ku jira gacanta shacabka Maraykanka [Daawo]
USA: Obama oo ku hanjabay inuu joojin doono hubka ku jira gacanta shacabka Maraykanka [Daawo]
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa khudbadiisa todobaadlaha Jimcihii shalay ku sheegay in halka sano ee xilka uga dhiman uu tilaabo ka qaadi doono hubka ku jira gacanta shacabka Maraykanka.
Obama ayaa sheegay in Isniinta soo socota uu Wasaarada Cadaalada ee Maraykanka kala tashan doono habka lagu xakameyn karo hubka sharciyeysan ee ku jira gacanta shacabka Maraykanka, arrintaasi oo loo aaneenayo weerarada joogtada ah ee ka dhaca gudaha dalkaasi.
Barack Obama oo sanadkan kaliya xilka uga dhimantahay ayaa marar hore isku dayey inuu xayiraad kusoo rogo noocyada hubka daraandooriga u dhaca ee shacabka gadan karaan, balse arrintaasi waxaa ka horjoogsaday Baarlamaanka Maraykanka oo ay hada hogaanka u hayaan Xisbga Jamhuuriga oo ah mid si weyn uga soo horjeeda in wax xayiraad ah la saaro ganacsiga hubka ee Maraykanka.
Inta badan Xildhibaanada Maraykanka ayaa la sheegaa inay dhaqaale ka helaan shirkadaha awooda badan ee hubka ka ganacsada, kuwaasi oo marar badan ku guuleystay inay horjoogsadaan sharciyo xakameenaya noocyada hubka daraan-dooriga u dhaca iyo rasaasta ay sida sharciga ah u gadan karaan shacabka.
Kooxaha u ololeeya ganacsiga hubka ayaa mar-walba adeegsada Qodobka 2aad ee Dastuurka Maraykanka oo qoraya in shacabka Maraykanka ay si sharci ah u gadan karaan hub, balse qodobkaasi ayaa la sheegay in la qoray xiligii dalka Maraykanka xoriyada ka qaatay Ingiriiska, waxaana lagu tilmaamaa Qodob aan hada la socon karin xaqiiqda ka jirta dalkaasi.
Dalka Maraykanka ayaa sanadkan oo kaliya ka dhaceen in ka badan 365 weerar oo midkiiba dhimasho iyo dhaawaca kasoo gaareen ugu yaraan 4 qof, waxaana sanad walba kumanaan dad ah ku dhintaan weeraro ka dhaca gudaha wadankaasi. Bishii November ee sanadkan ayaa la sheegay inuu sare usii kacay iibka hubka fudud oo ay shacabka gateen.
Title: USA: Obama oo ku hanjabay inuu joojin doono hubka ku jira gacanta shacabka Maraykanka [Daawo]